UMessi utakule iBarcelona ngegoli lesi-500 | News24
Madrid – Umdlali ongaconsi phansi kubalandeli beBarcelona, uLionel Messi, usindise iqembu lakhe emlonyeni wengwenya ngenkathi eshaya igoli lakhe lesi-500 nokwenze lezi zinkunzi zaseSpain zagwema ukushaywa okwesibili ezinsukwini ezingu-6.
Ngenxa yegoli likaMessi kanye nozwakwabo, naye ongalibheki ipali, uLuis Suarez, iBarcelona igcine iwine ngo-2-1 emuva kokulandela ngemuva bebhekene neSevilla.
Lokhu kunqoba kwenze iBarca ibe ngaphezulu ngamaphuzu amabili kwiReal Madrid, yona ewine ngo-3-0 ngenkathi ibhekene neLeganes, nalapho uGareth Bale, eshaye amagoli amabili.
IMadrid iphinde yamemezela nokuthi isikhwishikhwishi somdlali wayo, uCristiano Ronaldo, uzolula inkontileka yakhe nalezi zinkunzi zase-Europe kuze kube unyaka ka-2021 ngoMsombuluko.
IBarcelona iye kulo mdlalo isazikhotha amanxeba emuva kokubhaxatshulwa yiManchester City ngo-3-1 emdlalweni we-UEFA Champions League.
Igoli elishaywe nguMessi kulo mdlalo kube ngelesi-500 sekuhlanganisa nemidlalo yobungani.